Mpanolo-tsaina momba ny sidina amerikana momba ny habakabaka mifanila amin'i Damasy, Syria
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpanolo-tsaina momba ny sidina amerikana momba ny habakabaka mifanila amin'i Damasy, Syria
Ny US Federal Aviation Administration (FAA) dia namoaka fampitandremana mafy ho an'ireo mpitatitra rivotra rehetra ao amin'ny faritra Syriana noho ny fitokonan'ny tafika nataon'ny tafika amerikana, UK ary France.
Ny mpitatitra an'habakabaka amerikanina sy ny mpandraharaha ara-barotra ary ny olona rehetra mampiasa ny tombony amin'ny mari-pankasitrahana an'habakabaka navoakan'ny FAA afa-tsy ireo miasa fiaramanidina voasoratra amerikana ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka vahiny sy ny mpandraharaha ny fiaramanidina rehetra voasoratra any Etazonia afa-tsy ny vahiny dia mpandraharaha. Ampandrenesina ny mpitatitra mba hitandrina tsara rehefa miasa eo amin'ny habakabaka ao anatin'ny 200 kilaometatra an-dranomasina miala ao amin'ny Faritra Fahalalam-baovao momba ny sidina ao Damas (OSTT FIR) noho ny asan'ny miaramila mihamitombo ao Syria na ny manodidina azy.
Izany dia vokatry ny fitokonana nataon'ny tafika amerikana, UK, ary France any Syria ankehitriny ho setrin'ny fanafihana simika ahiahiana ny olom-pirenenan'i Syria nataon'ny mpanao didy jadona Syriana Bashar al-Assad.
Ny hetsika ara-tafika dia mety misy ny fanelingelenana GPS, ny fitohanana amin'ny serasera ary ny balafomanga misavoana an-kalamanjana miainga avy any amin'ny faritany Syriana, ao anatin'ny OSTT FIR, ary mivezivezy any amin'ny habakabaka mifanila aminy. Mety hiteraka risika tsy nahy ho an'ny sidina sivily amerikana miasa ao amin'io faritra io izany.
Ny fahafatesan'ny fizarana tsenan'ny FIT?